Media_To_Monitor Archives - Page 8 of 8 - News @ M-Media
သတင်းကျင့်ဝတ်တွေ သတင်းပညာတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ? (by ကောင်းကင်ကို)
အောက်တိုဘာ၊ ၂၈၊ ၂၀၁၂ ဆောင်းပါးရှင်၊ ကောင်းကင်ကို ဒီလို သတင်းဌာနကြီးတွေရဲ့ သတင်းတွေကြောင့်လည်း လူတွေ ဒီလောက်သွေးဆူနေတာ။ သတင်းက ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ INGO နှင့် OIC တို့ နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်ဟု ဆို[Read More…]
October 28, 2012 — Media To Monitor, ဆောင်းပါး
မြန်မာပြည်မှာ လူသတ်အကြမ်းဖက်ဝါဒကို တရားဝင် ဗြောင်ထောက်ခံ ဝါဒဖြန့်ခွင့်ရှိပြီလား?
အောက်တိုဘာ၊ ၂၁၊ ၂၀၁၂ M-Media မောင်ပုည တောင်ကုတ်မြို့ OIC ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲမှ ကြွေးကြော်သံ ပိုစတာပုံကို ပြည်တွင်းအခြေစိုက်7Days ဂျာနယ်မှ အကြီးတန်း သတင်းထောက် ဥက္ကာကိုကိုမှ ၄င်း၏ တရားဝင်[Read More…]
October 20, 2012 — Media To Monitor